Weli ma aragteen muqalas safiir u dalacay ? Soomaaliya ayeey ka dhacday! VIDEO – Warfaafiye:
Weli ma aragteen muqalas safiir u dalacay ? Soomaaliya ayeey ka dhacday! VIDEO
Ali Mohyadin Jul 12, 2017 0
Qunsulka Safaaradda Soomaaliya ee Kenya Cali Maxamed Sheekh “Cali Bagadi” ayaa mar uu booqday xabsi ku yaal magaalada Nairobi ee dalka Kenya wuxuu si aan wanaagsaneyn ula hadlay maxaabiis Soomaaliyeed oo dhameysatay xabsi mudo todobo sano xukunka dhameysatay laguna celinayay Muqdisho.
Waxaa akhristayaasheena usoo gudbin doonaa document-yo ku saabsan muqalasnimada heerka darajo ka gaaray iyo macaashka muqalasnimadiisii hore heerka ay gaarsiisneyd.